၁၀ တန်းအောင်ရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ - Myanmar Network
၁၀ တန်းအောင်ရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ
Posted by Yamin Aye on July 7, 2012 at 13:17 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
၁၀ တန်းအောင်ရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ အပိုင်း ၂
Permalink Reply by 011bpgp41n94b on July 7, 2012 at 16:15
အင်း ခုလိုအကြံပေးထားတာမျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်ရွေးချယ်မှုတွေမှန်ကန်သွားစေပါတယ်။ အလွန်အကျိုးရှိပါတယ်။
Permalink Reply by 0n3gwf289uac2 on July 7, 2012 at 19:30
Permalink Reply by Myo Myint Kyaw on July 7, 2012 at 19:57
တစ်နှစ်ကျသွားတာခဲ့သည်ရှိသော ကိုယ်က ကျောင်းတစ်ကျောင်းထဲက အောင်မြင်မှုနဲ့ယှဉ်ရင် ဘာမှမဟုတ်ပေမယ့်
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ယှဉ်ရင်တော့ လူထောင်သောင်းများစွာက ကိုယ့်ကို ကျော်တက်သွားကြမှာပါ.
ဒုတိယက သူငယ်ချင်းပြောသလိုပဲ တာထွက်ကတည်းက ဦးတည်ရာ လမ်းကြောင်း မှန်ကန်ဖို့ လိုအပ်တာပါပဲ
Permalink Reply by saw su thet wai on July 8, 2012 at 9:17
အရမ်းကောင်းပါတယ်။အစ်မရဲ့websiteနာမည်လေးသိပါရစေ။ပြီးတော့vzoaccountလဲသိချင်ပါတယ်။Thank you.I love you so much. Hie.....
Star MemberPermalink Reply by Yamin Aye on August 25, 2012 at 11:50
www.hlayamin.com ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ လာရောက်လေ့လာဝေဖန်ဖတ်ရှုဖို့လည်း ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
Permalink Reply by YIN YIN PYONE on July 9, 2012 at 11:14
Permalink Reply by saunngangel on July 9, 2012 at 11:15
မြန်မာပြည်က ပညာရေးကို တစ်ကယ်ပဲ ကောင်းစေချင်တယ် ဆယ်တန်းပြီးမှ မဟုတ်ပါဘူး မူလတန်းကနေစပြီးတော့ပေ့ါ ကျူရှင် ဆိုတာ က တစ်ကယ်တန်းကိုမရှိသင့်ပါဖူး ကျောင်းက ကောင်းကောင်းသင်လိုက်တယ်ဆိုရင် ကျူရှင် ဆိုတာ တစ်ကယ်မလိုတော့ဘူးလို့ထင်တယ် ပြီးတော့
Permalink Reply by Phyo Min Khaing on July 9, 2012 at 13:35
နင် မန်မိုရီစတစ်ရလို့ မုန့်ဝယ်ကျွေးတာမှတ်မိနေသေးတယ်
Permalink Reply by mg mg htut on July 10, 2012 at 11:13
သိမ့်ကောင်းပါတယ်။ ဆယ်တန်းတက်နေတဲ့ ကလေးတွေရဲ့မိဘတွေ အနေနဲ့ ယခု ပေးတဲ့ အသိလေးနဲ့ ဆိုရင်သူတို့ကလေးတွေအတွက်ပြင်ဆင်ချိန်ရတာပေါ့
Permalink Reply by 0zqm2oss26hgz on July 11, 2012 at 12:10
Permalink Reply by Wai Wai Moe on July 13, 2012 at 12:56
Permalink Reply by DORA MOE EI KHIN on July 13, 2012 at 13:31
အခုလိုမျိုး စဉ်းစားတင်ပြပေးတာကောင်းပါတယ် အမ အကျိုးပြုစာတစ်ပုဒ်ပါဘဲ